Sebenzisa ukuphinda udlale ngokukhawuleza ukuCelomnxeba umnxeba kwibhola ekhatywayo yaseMelika
Ngaphantsi kwe- Inkqubo yomceli mngeni kwakhona, Umqeqeshi webhola ekhatywayo ongavumelaniyo nomnxeba kasompempe unokucela oosompempe ukuba bayihlolisise kwakhona loo minxeba baphinde bayiphinde kwangoko. (I-NFL ivuse le nkqubo ngo-1999 emva kokuzama ukuyishiya ngasekupheleni kweminyaka yee-1980 kunye nee-1990s zakuqala, kwaye i-NCAA isebenzisa ukuphindaphinda kwangoko ukusukela ngo-2004. Nangona kunjalo, ukuba bacela umngeni umnxeba ngokuphinda baphinde bakhawuleze kwaye abapempe bathathe isigqibo emva kokuphonononga ukuba umnxeba umi, iqela elinikezele umceli mngeni liphulukana nexesha lokuphuma.
© Shutterstock / UPeter Kim
uthini umahluko phakathi kwe-amoxicillin nepenicillin
Ukucela umngeni kumnxeba, umqeqeshi kufuneka enze umceli mngeni ngaphambi kokuba ibhola ivele kwaye umdlalo olandelayo uqale. Ukubonisa umceli mngeni usebenzisa ukuphindaphinda kwangoko, umqeqeshi uphosa iflegi ebomvu ebaleni lokudlala. Ngokwesiqhelo, abaqeqeshi bebhola ekhatywayo balinda ukuba umdlalo ophindwayo uphinde uphononongwe kwindawo yabaqeqeshi ephezulu, okanye bajonge umdlalo kwiscreen esikhulu sebala ngaphambi kokukhupha umngeni.
Inkqubo yomceli mngeni yokudlala kwakhona kwangoko inabaxhasi bayo kunye nabathengisi, ngenxa yezi zizathu zilandelayo:
Abaxhasi: Yithi imiceli mngeni yenza umdlalo ulunge ngakumbi. Isantya somdlalo wale mihla sibeka uxinzelelo lokwenyani kwisakhono sikasompempe sokwenza iifowuni ezichanekileyo. Imiceli mngeni yokudlala kwangoko inika amaqela ithuba lokuguqula umnxeba ombi ngamanye amaxesha.
Abagxeki: Yithi imiceli mngeni yokudlala kwangoko icothisa umdlalo kwaye ayikhawulezi konke konke. Kananjalo nokuphazamiseka okuqhelekileyo okuphelelwa lixesha, ukumiswa kwewotshi, nezohlwayo, imingeni yokudlala kwakhona kwangoko isusa eyona nto abalandeli bathanda kakhulu ibhola ekhatywayo - isantya sayo kunye nemincili.
Ukudlala kwakhona kwangoko: Utshintsho lwango-2019 kwimithetho yomceli mngeni yeNFL
Nokuba ziphi na izimvo zabalandeli, ukuphindaphinda kwangoko sisixhobo esisetyenziswa ngabaqeqeshi bebhola ekhatywayo ukujongana nomnxeba. Ukongeza kolu hlolo luceliweyo, onke amanqaku okudlala amanqaku kunye nokujika (iimpazamo kunye neminyango) avavanywa ngokuzenzekelayo phinda igosa kunye nabaphathi abaphetheyo beNFL kwigumbi labo lokuphinda elinye eNew York.
uxinzelelo lwe-natrol kunye neziphumo ebezingalindelekanga zoxinzelelo
Entsha kwisizini ye-2019, abaqeqeshi baya kuvunyelwa ukuba bacele umngeni kuphazamiso lokudlula Izohlwayo . Kananjalo baya kuba nakho ukucela umngeni kwifowuni yokungenelela engadluli njengaleyo abalandeli beSanta bakholelwa ukuba bababize ngokuphumelela kumdlalo we-2019 NFC Championship.
Abaxhasi bokudlala ngokukhawuleza bathi lo mngeni uza kuyenza imidlalo yebhola ekhatywayo ukuba ibe yelunge ngakumbi. Kodwa umceli mngeni wokuba kufanelekile ukuba kubizwe isohlwayo okanye ungabizwanga kuya kubangela uxinzelelo olukhulu kumagosa aphindaphindwayo kunye nabaphathi abasebenza eNew York ukwenza umnxeba ofanelekileyo.
* Eli nqaku lilungisiwe ukuze libandakanye utshintsho lwe-2019 kumgaqo weNngeni we-NFL.
I-dextroamp amphet yi-30 mg cap
ipilisi engqukuva emhlophe 2355
Iziphumo ebezingalindelekanga zebudesonide / formoterol
Ngaba i-lovenox ichaphazela i-inr